Boron (ဘိုရွန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Boron (ဘိုရွန်)
Boron (ဘိုရွန်) ကဘာလဲ။
ဘိုရွန် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဘိုရွန် သည် သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရသော သတ္ထုဓါတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အရိုးသိပ်သည်းဆကောင်းစေရန်၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါကို သက်သာစေရန်၊ ကြွက်သားများသန်မာစေရန်၊ တက်စရိုစတီရုန်းဟော်မုန်းပမာဏများစေရန်၊ နှင့် အတွေးအခေါ်ကောင်းစေရန်အတွက် ဘိုရွန်ကို အသုံးပြုကြသည်။
ဘိုရစ်အက်ဆစ်ကို သွေးတိတ်စေသောဆေးအဖြစ်သုံးကြပြီး၊ မျက်စဉ်းခတ်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ တခါတရံ အမျိုးသမီးများ၏ မိန်းမကိုယ်တွင် ဖြစ်တတ်သော မှိုစွဲသောရောဂါအတွက် ဘိုရစ်အက်ဆစ်ပါသော ဆေးကို မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်ပြီးကုသကြသည်။
ဤဘယဆေး ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိသည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သတ်၍ လုံလောက်သော လေ့လာမှုများမရှိသေးပါ။ ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ သို့သော် ဘိုရွန် သည် အစားအစာမှ ကယ်စီယမ်ဓါတ်၊ ဖော့စဖိတ်ဓါတ်နှင့် မက်ဂနီဆီယမ်ဓါတ်များကို စုပ်ယူမှုအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းကို လေ့လာထားသော လေ့လာမှုများရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခုအခါ သုတေသနပညာရှင်များနှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းများသည် ဆေးများထုတ်လုပ်ရာတွင် ကာဗွန်အစားထိုးသုံးနိုင်ရန် ဘိုရွန်ကို ပို၍စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။
ဘိုရွန် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဘိုရွန်ကို ခြောက်သွေ့ပြီး နေရောင်တိုက်ရိုက်မကျရောက်သော နေရာတွင် ထားပါ။
ဘိုရွန် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
သုတေသနများပို၍ မတွေ့ရှိသေးခင်အချိန်ထိ ဘိုရွန်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ ကလေးနို့တိုက်နေသောမိခင်များနှင့် ကလေးငယ်များကို မတိုက်သင့်ကြောင်း သုံးစွဲသူကို အသိပေးပါ။
ဘိုရွန် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဘိုရွန် တွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိနိုင်သည်။
• အော့အန်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း (ပမာဏများလျင်)
• ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ အရေပြားယောင်ယမ်းခြင်း။
• ယာယီအဆိပ်သင့်သောလက္ခဏာများ- လက်တုန်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ နုန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ အရေပြားကွာခြင်း၊ အနီကွက်များပေါ်ခြင်း။
ဘိုရွန် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
ဘိုရွန်သည် အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုးပွားစေပြီး မက်ဂနီဆီယမ်နှင့် ဖော့စဖိတ်ဓါတ်တို့ကို အကျိုးအားနိသင်လျော့စေသည်။
ဘိုရွန် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ဘိုရွန်ကို ပမာဏအမျိုးမျိုးနှင့် အသုံးပြုကြောင်း လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးတွင် ဖော်ပြထားသည်။ နေ့စဉ် ၃ မီလီဂရမ်မှ ၆ မီလီဂရမ်အထိ သုံးလေ့ရှိသည်။ ဘိုရစ်အက်ဆစ်ကို ပါးစပ်မှသောက်သုံးခြင်းသည် သေစေနိုင်သည့်အတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
လူနာတိုင်းအတွက် အသုံးပြုရန် ဆေးပမာဏမှာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ လူနာ၏ အသက်၊ကျန်းမာရေး၊ နှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပါမည်။ ဘယဆေးများသည် အမြဲတမ်းအသုံးပြုရန် စိတ်မချရပါ။ သင့်တော်သော ဆေးပမာဏအတွက် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘိုရွန် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001.Print version. Page 110.
boron.aspx?activeingredientid=894&activeingredientname=boron. Assessed August 6, 2016.
Not boring at all. Boron is the new carbon in the quest for novel drug candidates.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637326/. Assessed August 6, 2016.